Wasiirki hore ee warfaafinta Somaliland oo Turkiga ku geeriyooday – Radio Daljir
Wasiirki hore ee warfaafinta Somaliland oo Turkiga ku geeriyooday
Juunyo 5, 2019 12:04 g 0
Dalka Turkiga waxaa ku geeriyooday Wasiirkii hore ee Warfaafinta Soomaaliland xilligaana ka mid ahaa Xubnaha Golaha Wakiilada Maamulkaas.
Alle ha u naxariistee Marxuum Cali Sheekh Ibraahim oo loo yaqaanay(Aareeye) ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa uu ku sugnaa dalkaasi,kadib markii halkaasi loogu qaaday xaalad caafimaad.
Marxuumka mar wuxuu soo noqday Wasiirka Warfaafinta Soomalailand o uu mudo haayay,waxaana geeridiisa ka tacsiyadeeyay Xisbiga WADANI oo uu Marxuumka ka tirsanaa.
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka oo ku Baaqay in la iska Kaashado hagaaajinta deegaanka.
Ciidamadda kenya iyo Alshabaab oo ku dagalamay Waqooyi Bari Kenya